केही रोगका घरेलु उपचार विधि - रामकुमार परियार
Home / स्वास्थ / केही रोगका घरेलु उपचार विधि
रामकुमार परियार Friday, January 09, 2015 0
रोग-विराम कहाँ , कतिबेला हुन्छ कसैलाई थाहा हुदैन । हुन त रोग लागेर उपचार गर्नु भन्दा लाग्नै नदिनु बुद्धिमता हो। तर पनि काँचो शरीर को भर हुदैन । गाउँघर तिर सानो तिनो रोग लागे मा घरायसी औषधि र जडिबुटी प्रयोग गर्ने तथा झारफुक समेत गर्ने प्रचलन अझै छ । तर सहर बजार तिर घरायसी औषधि तथा घरेलु उपचारको बारेमा धेरैलाई थाहै हुँदैन । थाहा भएपनि घरेलु औषधि प्राप्त हुँदैनन् । यस्तो अवस्थामा क्लिनिक धाएर एलोप्याथिक औषधि लिनुको विकल्प हुँदैन । यद्यपि सहर बजारमा समेत हामीले घरकोठा मै केही सामान्य रोगको घरेलु विधिबाटै उपचार गर्न सक्छौँ । यसो गरियो भने उपचार खर्च जोगिने मात्र नभई औषधिको नकारात्मक असर बाट पनि बँचिन्छ । यहाँ त्यस्ता केही रोग र तिनका घरेलु उपचारका विषयमा जानकारी प्रस्तुत गरेको छु ।
१. चिसो र रुघाखोकीः
चिसो र रुघाखोकी लागेमा मरिच र सुकेको अदुवा पिँधेर धुलो बनाउनुहोस्, त्यसलाई महमामोलेर दिनको २।३ पटक खानुहोस् । यसो गर्दा रुघाखोकी सन्चो हुन्छ । साथै बेसारमा मह मिसाएर खाने गरेमापनि रुघाखोकी र चिसो भाग्छ ।
वान्तावा उल्टी विभिन्न कारणले हुनसक्छ । सामान्य उल्टी रोक्नका लागि पानीमा कागती को रस र केही नुन हालेर खाँदा फाइदा हुन्छ । साथै कागतीको रस र चिनी मिसाएर पानीमा हालेर खाँदापनि उल्टी रोक्न मद्दत गर्छ ।
रातमा खाना खाइसके पछि इशागोल र दूध मिलाएर खाँदा कब्जियतमा फाइदा हुन्छ । साथै बिरे नुनको सेवनले पनि कब्जियतमा राहत पुग्छ ।
४. सुख्खा खोकीः
दुइ तिनवटा ल्वांग घिउमा तताएर मुखमा हाल्नुहोस् र चपाउनुहोस् । नियमित रुपमा यसो गर्दा सुख्खा खोकी कम हुँदै जान्छ । साथै मरिच र अदुवाको धूलो बराबर मात्रामा तातो घिउमा मिलाएर खाँदापनि हुन्छ ।
५.खकार सहितको खोकीः
अदुवा, मरिच तथा तुलसीका केहीपातमिलाएर पिँध्नुहोस् अनि तातो पानीमा मिलाएर खानुहोस् । धनिया, चिनी र पानी मिलाएर पकाएर बिहानपख पिउँदा पनि खकार सहितको खोकीकम हुन्छ ।
६.अपच तथा पेट फुलिने, ग्यास भरिनेः
५ ग्राम सुकेको अदुवाको धूलो १ लिटर पानीमा उमालेर दिनको २।३ पटक पिउनुहोस् । साथै एक चम्चा मनतातो पानीमा एक चिम्टी हिंग घोलेर पिउनुहोस् । यसो गर्दा अपच हुने तथा पेट फुलिने, डकार आउने जस्ता समस्या कम हुन्छन् ।
७. दाँत दुखेमाः
ल्वांगको तेल किराले खाएको दाँतको प्वालमा राख्नुहोस् । साथै दाँत दुखाइ कमगर्न हिंगतथानुनमिलाएर दुखेको दाँतमा राख्नु पनि उपयुक्त हुन्छ । मरिच र ल्वांग मुखमा राखेर चपाउँदा पनि दाँतको दुखाई केही कम हुन्छ ।
अदुवाको रस मनतातो गरी तताएर दुइचार थोपा कानमा नियमित राख्दा कानको दुखाइ कम हुन्छ । साथै लसुनको रसका दुइचार थोपा कानमा दिनको ३ पटक राख्नुहोस् । यसो गर्दा पनि कानको दुखाइ कम हुन्छ ।
सुकेको अदुवाको धुलो र चिनी पानीमा मिलाएर दिनमा दुइपटक पिउनुहोस् । इशागोल र दही मिलाएर दिनको दुइ पटक खानुहोस् । मोहीमा चियापत्ति मिलाएर खाँदापनि झाडापखाला कम हुन्छ ।